Dowladda federaalka oo shaacisay in ay dhacayaan shirar kale oo la xiriira heshiiskii Adis-Ababa – Radio Daljir
Dowladda federaalka oo shaacisay in ay dhacayaan shirar kale oo la xiriira heshiiskii Adis-Ababa
Agoosto 30, 2013 3:25 b 0
Muqdisho, August 30, 2013 – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? ayaa shaacisay in ay jiraan shirar kale oo u dhexeeynaya Jubbaland iyo dowladda federaalka ah, kaas oo lagu xoojiyo shirkii dhowaan ka soo dhamaaday Adis-Ababa
Wasiiru-dowlaha madaxtooyada Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir wuxuu sheegay in ay qorshaynayaan shirar kale oo la xiriira wadda-hadallada Jubbada iyo dowladda dhexe, shirarkaas ayaa ka dhici doona Muqdisho iyo Kismaayo.
Faarax wuxuu xusay? in ay jiri karaan khilaafyo ka dhasha wada-hadalka iyo is-fahanka dambe ee mustaqbalka dhow, wuxuuna shirarkaas ku macneeyey kuwa lagu adkaynayo heshiiska, loogana hortegayo in uu khilaaf yimaado.
Wasiiru-dowladdaha madaxtooyada Soomaaliya ayaa tilmaamay ?in baahi weyn loo qabo in ?la helo maamul ay bulshadu ku wadda qanacsan yihiin oo ka dhasha gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, taas bedelkeeda wuxuu baaq u jeediyey shacabka gobolladaas oo ku wacyi-geliyey illaalinta nabbada.
Ugu dambeyntii wuxuu ku baaqay in la hir-geliyo qoddobadii ka soo baxay shirkii Adis-ababa, hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa?id oo uu ku qabtay garoonka Aadan cadde ee Muqdisho kadib soo laabashadii shirka.